Flume vs. Kafka vs. Kinesis - Yakatsanangurwa Nongedzo pane Hadoop Ingestion Zvishandiso - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
AWS, Big data, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji, Uncategorized
Flume vs. Kafka vs. Kinesis - Yakatsanangurwa Nongedzo pane Hadoop Ingestion Zvishandiso
Sezvo huwandu hwe data huripo hwemasisitimu ekuongorora huri kuwedzera zuva nezuva, kudiwa kwenzira nyowani dzinokurumidza kutora data iyi yese mumikova inoenderera iri kubuda zvakare. Apache Hadoop ingangove imwe yeanonyanya kushandiswa masisitimu ekugoverwa kuchengetedza uye kugadzirisa kwe Big Data data seti. Uye nerubatsiro rwezvishandiso zvakasiyana-siyana zvekupinza zveHadoop, zvino zvave kugoneka kutora mbishi sensor data semabhinari hova.
Matatu eanonyanya kufarirwa Hadoop kumedza maturusi anosanganisira Flume, Kafka, uye Kinesis. Iyi posvo yakanangana nekukurukura zvayakanakira nezvayakaipira kushandisa chishandiso chimwe nechimwe - kubva pakutanga kutora dhata kusvika pakuongorora uye kuyera.
Kuverenga Kwakanaka: 10 Big Data Kuona Zvishandiso
Tisati tanyura mune izvi zvimwe, ngatinzwisisei kuti rwizi rwebhinari chii. Yakawanda data inova inowanikwa - mushandisi matanda, matanda kubva IoT zvishandiso, etc ndiwo mafambiro ezvinyorwa zviitiko izvo zvinogadzirwa neimwe chiito chemushandisi. Iyi data inogona kudimburwa kuita chunks zvichienderana nechiitiko chakaitika - mushandisi anodzvanya bhatani, shanduko yekumisikidza, zvichingodaro. A binary data stream ndiyo iyo pane kuputsa rwizi rwe data zviitiko, iyo data inounganidzwa murukova runoenderera pane imwe chiyero. Zvishandiso zvinopinza zviri mubvunzo zvinotora iyi data uye wobva wasundira kunze serialized data kuHadoop.
Flume vs. Kafka vs. Kinesis:
Zvino, dzokera kumaturusi ekupinza. Dzese Flume neKafka zvinopihwa neApache nepo Kinesis iri sevhisi inotungamirwa zvizere inopihwa ne Amazon.
Flume inopa akawanda akafanogadzirisirwa sosi yekumedza uye zvakare inobvumidza tsika kuyerera kuitisa. Inopa maviri maitiro ekumisikidza, Inotakurika sosi, uye Chiitiko-Chinotungamirwa sosi. Ndeipi yaunosarudza zvinoenderana nezvinotsanangudza nyaya yako yekushandisa. Zvekukwanisika Flume sosi maoko-kubva meseji kune chiteshi. Mikana yakawanda inobvumira kuyera kwakaringana futi.
Flume zvakare inobvumidza kumisikidza akawanda evaunganidzi mauto ekuenderera mberi kuwanikwa kana mukoteri akakundikana.
Kafka iri kuwana mukurumbira mu Enterprise space seyokushandisa yekushandisa yekushandisa. Chinongedzo chinotenderera paKafka chinonzi mugadziri. Kafka zvakare inopa akawanda ekugadzira mashandiro uye zvakare inoita kuti iwe ushandise yako wega interface. NaKafka, iwe unofanirwa kuvaka yako mutengi kugona kuvhara mu data - hapana default yekutarisa kuitisa.
Kukwanisika paKafka kunowanikwa nekushandisa zvikamu zvakagadziridzwa mukati kati memugadziri. Dhata inoparadzirwa pamatanho ari musumbu. Kuwedzera kwepamusoro kunoda imwe nhamba yezvikamu. Chikamu chinonyengera cheichi chinogona kunge chiri kusarudza rakakodzera partition scheme. Kazhinji, metadata kubva kunobva inoshandiswa kupatsanura hova nenzira ine musoro.
Chinhu chakanakisa nezve Kafka kugadzikana kuburikidza nemitezo yakaparadzirwa. Idzo replicas hadzina kukanganisa iko kuburitsa munzira ipi neipi. Kafka zvakare inonyanya kufarira pakati pemabhizinesi mazhinji.
Kinesis yakafanana neKafka munzira dzakawanda. Iri basa rakachengetedzwa zvizere rinobatanidza chaizvo nemamwe masevhisi eAWS. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuyera uye kugadzirisa irinouya ruzivo. Kinesis, kusiyana neFume neKafka, inongopa chete mienzaniso yekumisikidza, hapana varimi vanogadzira varipo.
Iyo imwe yakashata Kinesis ine pamusoro peKafka ndeyekuti ibasa regore. Izvi zvinounza latency kana uchitaurirana neye pa-poresisheni sosi uchienzaniswa neKafka pane-pekutangisa kuitisa.
Saka Ndechipi Chaunosarudza - Flume kana Kafka yeKinesis:
Sarudzo yekupedzisira yeiyo yekumesa chishandiso zvinoenderana nenyaya yako yekushandisa. Kana iwe uchida kwazvo kukanganisa-kushivirira, DIY mhinduro uye unogona kuve nayo Developers yekuitsigira, Kafka ndiyo nzira chaiyo yekuenda. Kana iwe uchida chimwe chinhu chiri kunze-kwebhokisi, shandisa Kinesis kana Flume. Ikoko zvakare, sarudza zvine hungwaru zvichienderana nekuti data richapedzwa sei. Kafka naKinesis vanodhonza data nepo Flume achiisundidzira kunze vachishandisa chinhu chinonzi data sinks.
Kune vamwe vatambi zvakare vakaita se:
Apache Dutu - zvakare yekushambadzira kwedata asi inowanzo shandiswa mazwi mapfupi, pamwe yekuwedzera kune yako iriko Hadoop nharaunda
Chukwa (chirongwa cheHadoop) - yakazvipira kuunganidzwa hombe nekuongorora. Yakavakwa pamusoro peHDFS uye MepuDeredza uye ine scalable zvakanyanya. Inosanganisirawo simba rekutarisa maturusi
Kutenderera data kunopa a bhizimisi mukana wekuziva nguva chaiyo bhizimisi value. Kuziva vatambi vakuru uye kuti ndeipi inoshanda zvakanyanya kune yako kesi kesi inogonesa iwe kuti uite sarudzo dzekuvaka dzakaringana.
Kutsvaga nzira yekuzvibata nayo Big Data inonetsa kumasangano emhando dzose. Kana iwe uchida rubatsiro rwekusimudzira Big Data kune kambani yako saka inzwa wakasununguka kutibata nesu: